9x24 Podcast: password Mamaneja VS iCloud Keychain | Ndinobva mac
Pakati pezuro manheru podcast takataura nevatinoshanda navo kubva kuActualidad iPhone uye Actualidad Gadget nezvenyaya dzinoverengeka dzakakurumbira nezveApple. Chokutanga kuoneka kwaive kurarama kwenguva refu kwezvigadzirwa zvavo uye ongororo ichangoburwa pamusoro pekugara kweMac, iPhone kana iPad iyo yatinayo mudzimba medu. Zvese zvishandiso zvine hupenyu hwakaganhurirwa, uye zvigadzirwa zveApple zvinoita zvakafanana.
Uyewo isu tinoongorora pakureba huwandu uye mhando yemaneja epasiwedhi iyo yega yega yatinoshandisa muzuva redu zuva nezuva, kuwedzera kune iwo mazano anowedzerwa nevashandisi. Muchitsauko chitsva ichi che # podcastapple hapana kushomeka kwekuseka, mamiriro akanaka uye pamusoro pezvose, kuva nenguva yakanaka kutaura nezve izvo isu zvatinofarira.
Kana iwe uchida iwe unogona kuti tevera isu kurarama wega wega Chipiri manheru, zvakananga kubva chiteshi chedu paYouTube, kana kumirira maawa mashoma, kusvikira podcast odhiyo yavapo kubudikidza iTunes, senguva dzose mangwanani eChitatu ega ega. Kana iwe uine chero dambudziko, kusahadzika kana zano reedu podcast unogona kuzvitaura rarama kuburikidza nehurukuro inowanika paYouTube, uchishandisa hashtag #podcastapple pa Twitter kana sezvatakaratidza pakutanga kubva teregiramu yedu chiteshi.
Uye zvakare isu tinofanirwa kudaro tenda vese varipo kukambani yako mune vakakura ava, Vazhinji vashandisi vari kusangana nesu tiri vapenyu uye iwe unotibvunza isu zvakananga nezve tekinoroji yazvino yeApple, zvigadzirwa zvaro nevamwe Izvo zvinofadza kwatiri kugovana zviitiko uye tinovimba kuti iyi nharaunda yevashandisi inowedzera zuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Podcast 9 × 24: Mamaneja ePassword VS iCloud Keychain
Muimbi Axl Rose anoti Tim Cook ndiye Donald Trump weindasitiri yemimhanzi